My Life asaDoctor ဆရာဝန်ဘဝ စာမျက်နှာ: Doctor ဒေါက်တာ
Doctor ဒေါက်တာဆိုတာ အဓိပ္ပါယ် (၃) မျိုး ရှိပါသတဲ့။
(၁) Doctor ပါရဂူဘွဲ့ရထားသူ၊
(၂) Physician သမားတော် နဲ့
(၃) Surgeon ခွဲစိတ်ဆရာဝန်။
Doctor ကို နာမည်ရှေ့မှာ Title ကင်ပွန်းတပ်ခေါ်ရတာဟာက (လက်တင်) စကားကနေလာပြီး၊ စာလုံးပေါင်းရော အဓိပ္ပါယ်ပါတူတယ်။ သင်ကြားသည်၊ သင်ကြားရန်ကနေလာတဲ့ နာမ်စာလုံး Docēre ဆိုတာ ဖြစ်တယ်။ ဥရောပမှာ တက္ကသိုလ်တွေ စပေါ်ကတည်းကနေ ဂုဏ်ပြုခေါ်လာနေခဲ့တာပါ။ ဒိနောက် ကိုလိုနီနယ်တွေဆီ ရောက်တယ်။ အမေရိကန်၊ မြန်မာနိုင်ငံလဲပါတယ်ပေါ့။ Doctorate-level degree ပါရဂူဘွဲ့နဲ့ အဆင့်တူတာ ရထားသူကို Dr. နဲ့ Dr တပ်ခေါ်တာဟာ စာသင်နေတဲ့ ပညာရှင်ဆရာတွေရော သုတေသနပြုနေသူ ပညာရှင်တွေပါ အကြုံးဝင်ပါတယ်။
Physician ဆေးပညာရှင်ကို မြန်မာလို “သမားတော်” လို့ ယေဘုယျခေါ်နေခဲ့တယ်။ ရိုးရိုး MBBS ဆေးပညာဘွဲ့ ရယုံနဲ့ “သမားတော်” လို့ ခေါ်လေ့မရှိကြဘူး။ သူများနိုင်ငံတွေမှာတော့ ဆရာဝန်မှန်သမျှ Physician လို့ အများဆိုင်နာမ်အနေနဲ့ ခေါ်ပါတယ်။ “ဆေးပညာကို အသုံးချသူပညာရှင်” လို့ အဓိပ္ပါယ်ဆောင်တယ်။ ဆေးပညာကို တိုးတက်စေအာင်လုပ်မယ်၊ ထိန်းသိမ်းတာလုပ်မယ်၊ လူ့ကျန်းမာရေးကို စောင့်ရှောက်ပေးမယ်၊ ဒီလိုလုပ်တာတွေထဲမှာ လေ့လာသင်ယူ-သင်ကြားခြင်း၊ ရောဂါရှာဖွေခြင်း၊ ကိုယ်ကျန်းမာရေး-စိတ်ကျန်းမာရေးကို ကုသပေးခြင်းတွေပါတယ်။
သူတို့အထဲမှာ Specialist medical practitioners အထူးကုဆရာဝန်တွေပါမယ်။ General practitioners (GP) မိသားစု ဆရာဝန်တွေဆိုတဲ့ လူနာတဦးချင်းဖြစ်ဖြစ်၊ မိသားစုတွေကိုဖြစ်ဖြစ်၊ အသိုင်းအဝန်ကိုဖြစ်ဖြစ် ကျန်းမာရေးအတွက် တာဝန်ယူ ကုသပေးသူတွေလဲပါတယ်။ ဒီလိုဆရာဝန်တိုင်းဟာ ဆေးပညာကို အခြေခံကအစ (ဥပမာ ခန္ဓာဗေဒ၊ ဇီဝကမ္မဗေဒ၊ ရောဂါဗေဒ)၊ ကုသနည်း ဆိုတဲ့ ဆေးသိပ္ပံပညာတွေကိုပါ အသေးစိတ် သင်ယူတတ်မြောက်ထားရတယ်။ ဒါတင်မက Art or craft of medicine ဆေးပညာရဲ့အနု-လက်မှုပညာကိုပါ နားလည်ကြရပါတယ်။
Surgeon ဆိုတာက Surgery ခွဲစိတ်ဆေးပညာအထူးကုဖြစ်တယ်။ ခွဲစိတ်ပညာမှာလဲ အမျိုးမျိုးအကျုံးဝင်တယ်။ ခွဲစိတ် အထူးကုတိုင်းဟာ Physician ဆေးပညာ၊ Dentist သွားဘက်ဆိုင်ရာဆေးပညာ၊ Podiatrist ခြေထောက်ပိုင်း ဆေးပညာ၊ Veterinarian တိရစ္ဆာန်ဆေးပညာ ဆရာဝန်တွေဖြစ်ပြီးမှ ထပ်ပြီးအထူးပြုသင်ယူထားရသူဖြစ်တယ်။
Doctor စကားလုံးကို တခြားနေရာတွေမှာလဲ သုံးပါသေးတယ်။ တခုခုကို ဆရာဝန်တွေဆေးကုသလို ပြောင်းသွားအောင် လုပ်ပေးတာကိုလဲ ကြိယာအနေနဲ့ သုံးလေ့ရှိတယ်။ ကောင်းသွားအောင်ရော ဆိုးသွားအောင်လုပ်တာမှာပါ သုံးတယ်။
• She doctorred the soup withadash of sherry. စွပ်ပြုတ်ကို ပိုပြီး အရသာရှိအောင် ပြုပြင်စီမံလိုက်တယ်။
• He doctors people. လူတွေကိုသွားပြီးဆရာလုပ်တယ်။
• He doctored the evidence. သက်သေခံပစ္စည်းကို လိုသလိုပြုပြင်တယ်။
ရှေးအင်္ဂလိပ်မှာ Doctor ဆိုတာ Expert ကြွမ်းကျင်သူ၊ Authority အခွင့်အာဏာရှိသူလို့ အဓိပ္ပါယ်ရတယ်။ ဘမ်းစကား အနေနဲ့ တောစခန်းထွက်ချိန်နဲ့၊ သဘောင်္ပေါ်မှာ ထမင်းချက်သူကိုလဲ ဒေါက်တာ ခေါ်ပါသေးတယ်။ ဆေးပညာမဟုတ်တဲ့ နယ်ပယ်တွေမှာလဲ ဒေါက်တာခေါ်တယ်။ တခြားဘာသာရပ်တခုခုမှာ Doctor of Philosophy Ph.D. ဘွဲ့ရရင် ဒေါက်တာ ခေါ်တယ်။ ခရစ်ယာန်ဘာသာမှာ Theology (Th.D.) ဘွဲ့ရထားသူတွေကိုလဲ ဒေါက်တာလို့ ခေါ်တယ်။ Doctor of the Church လို့လဲရှိပါတယ်။
• ဆေးပညာဆိုရင် အမေရိကားမှာ Doctor of medicine (M.D.) နဲ့ Doctor of osteopathic medicine (D.O.) ဘွဲ့ရတာရင် ဒေါက်တာခေါ်နိုင်တယ်။ Osteopathy ဆိုတာက တခြားနည်းဆေးပညာရပ်တခု ဖြစ်တယ်။
• အမေရိကားမှာ DPM, MD, DMD, DDS, DPT, DC ဘွဲ့တွေရရင် ဒေါက်တာခေါ်ပြီး၊ ယူကေမှာ MBBS ရရင် ခေါ်တယ်။
• Veterinary medicine တိရစ္ဆာန်ဆေးပညာဘွဲ့ရသူတွေကိုလဲ ဒေါက်တာခေါ်တယ်။
• Folk medicine ခေါ်တဲ့ ရိုးရာဆေးပညာ ကျွမ်းကျင်သူကို ခေါ်တာလဲရှိတယ်။
• ဆရာဝန်တဦးဟာ ဆေးပညာရပ်နဲ့ဆိုင်တာ၊ သိပ္ပံပညာရပ်ဆိုင်ရာ ဘာသာရပ်တခုခုကို Ph.D. ဘွဲ့တွေပါထပ်ရရင် အထူးကုဆရာဝန်ဆိုတာထက် ပညာရှင်လို့ သတ်မှတ်တာက ပိုပြီးသင့်လျှော်လာတော့တယ်။
အမေရိကားမှာ ခွဲစိတ်ဆရာဝန်တွေကို တခြားအထူးကုတွေထက်ပိုပြီး ကြာကြာသင်ပေးတယ်။ ရိုးရိုးကောလိပ်မှာ ၄ နှစ်၊ ဆေးကောလိပ်မှာ ၄ နှစ်နဲ့ ဆေးရုံမှာ ၃ နှစ်၊ စုစုပေါင်း ၁၁ နှစ်ကြာသင်ရတယ်။ အထူးကုဆိုရင် ဆေးရုံမှာတင် ၈ နှစ်ထိ နေရတယ်။ ဆရာဝန်ဖြစ်ချင်သူတိုင်း ကောလိပ်မှာ Biology ဇီဝဗဒေ၊ Chemistry ဓါတုဗေဒ၊ Physics ရူပဗေဒ၊ Math သင်္ချာတွေအပြင် English အင်္ဂလိပ်စာပါသင်ရတယ်လို့ သတ်မှတ်ထားတယ်။ ၄ နှစ်ကို Medical school နဲ့ ၅ နှစ် အနည်းဆုံး Residency လို့လဲရှိတယ်။ ၉ နှစ်ကြာတယ်။ မြန်မာပြည်မှာတော့ ၆ နှစ်နဲ့ အပြီးအစီးလုပ်လိုက်တာဟာ စဉ်းစားစရာဖြစ်မနေပါလား။
ဆရာဝန်တွေဟာ သူများတွေထက် အလုပ်ချိန်ပိုတာများတယ်။ ၂ဝဝ၈ စစ်တမ်းတခုအရ ဆရာဝန် ၁ဝ ယောက်မှာ ၃ ယောက်ဟာ တပတ်မှာ နာရီ ၆ဝ လုပ်ခဲ့ရတယ်။ ထုံးစံက နာရီ ၄ဝ သာဖြစ်တယ်။ ရုံးလို၊ ဓါတ်ခွဲခန်းလိုမှာ လုပ်ရသူတွေက အချိန်သတ်သတ်မှတ်မှတ်ရှိနိုင်ပေမဲ့ တခြားဆရာဝန်တွေက အရေးပေါ်ခေါ်ရင် ထပြေးကြရတယ်။ အမေရိကားမှာ ဆရာဝန်တွေ ဝင်ငွေကောင်းတယ်လို့ ဆိုနိုင်တယ်။ ၂ဝဝ၈ စစ်တမ်းမှာဘဲ ရိုးရိုးဆရာဝန်တွေက တနှစ်မှာ ဒေါ်လာ ၁၈၆,ဝ၄၄ ရကြပြီး၊ အထူးကုဆရာဝန်တွေက ၃၃၉,၇၃၈ ဒေါ်လာရကြတယ်။
ဒေါက်တာ (ဆရာဝန်) အဓိပ္ခါယ်ဖွင့်ဆိုမှုဟာ နေရာဒေသအလိုက် အရည်အချင်း၊ ဘွဲ့အမည်၊ စတာတွေ ကွဲပြားပါတယ်။ ဝင်ငွေလဲ မတူပါ။ ဒါပေမဲ့ အားလုံးမှာ တူညီချက်တခုရှိတယ်။ Ethics of medicine ဆေးပညာပဋိညာဉ်ဆိုတဲ့ စောင့်ထိန်း လိုက်နာအပ်တဲ့ စိတ်နေစိတ်ထား၊ အပြောအဆို၊ အပြုအမူ (ကံသုံးပါး) အတွက် ပြဋ္ဌာန်းချက်တွေ ဖြစ်တယ်။ မြန်မာပြည်က ဆရာဝန်တိုင်း Hippocratic Oath ဟစ်ပိုကရေးတီးပဋိညာဉ်ကို လိုက်နာကြရတာဟာ တသက်တာအတွက်ဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်တော့်ကို “ဆရာ” လို့တလုံးတည်းခေါ်တာ သဘောကျတယ်။ အသက်ကြီးပေမဲ့ “ဆရာကြီး” မဟုတ်ပါ။ ဆေးလောကမှာ အထူးကုတွေကိုသာ “ကြီး” ထည့်လေ့ရှိတယ်။ စာရေးရင်တော့ နာမည်ရှေ့မှာ “ဒေါက်တာ” လို့ ရေးပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ၁၉၉ဝ ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကို အစိုးရဂေဇက်မှာ ဒီအတိုင်းပါတယ်။ ရွေးကောက်ပွဲက ရတာဆိုလို့ ဒါတခုဘဲရှိလို့ပါ။
Posted by Dr. Tint Swe at 9:05 PM